Qaraxii Kabuul: Caruuskii rajada beelay "ka dib weerarkii lagu hoobtay" - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaQaraxii Kabuul: Caruuskii rajada beelay “ka dib weerarkii lagu hoobtay”
Kabul (JigjigaOnline) – Caruuskii arooskiisa lala beegsaday qaraxa gudaha caasimadda Kabul ee dalka Afghanistaan ayaa sheegay in uu niyad jabay kadib weerarkii dhimashada dhaliyay.
Waraysi uu siiyay Telefishin ayaa, Mirwais Elmi waxaa uu ku sheegay in ay xaaskiisa ay badbaaday, balse walaalkii iyo dad kale oo qaraabadiisa ah ay ka mid noqdeen 63 qof ee ku dhintay weerarkii Sabtidii.
Kooxda isku magacowdaay dowladda Islaamka ayaa sheegatay in weerarka ay qaadeen kaas oo sidoo kale ay ku dhaawacmeen in ka badan 180 qof.
Madaxweyne Ashraf Ghani ayaa ku tilmaamay weerarka mid waxuushnimo ah.
Waxaa uu ku eedeeyay Ururka Taalibaan in ay fursad siinayaan Argagixisada, hase ahaatee Taalibaan oo wadahadalo nabdeed kula jirta Mareykanka ayaa cambaareysay weerarka.
Sidee u ekaan kartaa Nabadda Afghanistaan?
Waraysiga uu siiyay Tolo News, Mirwais Elmi ayaa waxaa uu dib u milicsaday dadkii martida ahaa ee sida faraxdu ku jirtay isku salaamayay hoolkii arooska iyadoo saacado kadibna ay noqtay goobtii meel maydad badan ay yaalaan.
“Qoyskeyga iyo Xaaskeygu way argagaxsanyihiin xitaa may hadli karaan caruusadii way suuxday ,” ayuu yiri.
“waxaan lumiyay rajadeydii. Waxaan lumiyay walalkeey , waxaan lumiyay saaxiibbadey, waxaan lumiyay qaraabadeyda. Waligey ma arki doono faraxd dambe nolashayda.
“Ma aadi karo goobta aaska waxaan dareemayaa tabar daro. waxaan ogahay in aysan taasi noqon doonin dhibaatadii ugu dambeeysay ee ku dhacda dadka reer Afghanistaan dhibaatadu way sii socon doontaa ayuu raaciyay hadalkisa.
Caruusada Aabaheed ayaa warbaahinta dalka Afghanistaan u sheegay in 14 xubnood oo ka mid ahaa qoyskiisa ay ku dhinteen weerarka.
Bayaanka ay soo saartay kooxda IS ayaa lagu sheegay in mid ka mid ah dagaalyahanadooda uu isku qarxiyay meel ay dad badani isugu yimaadeen halka kuwo kalana ay qarxiyeen markii ay goobta soo gaareen gawaarida gurmadka deg deg ah.
Weerarku waxaa uu ka dhacay xaafad ay ku badanyihiin muslimiinta shiicada ah.
Suniyiinta Muslimiinta ah oo ay ku jiraan Taalibaan iyo kooxda Daacish ayaa dhowr jeer bartilmaameedsaday shiicada laga tirade badanyahay ee qoomiyada Hazara kuna nool Afghanistaan iyo Pakistaan.
Munir Ahmad, oo 23 jir ah kana mid ahaa dadkii lagu marti qaday xafladda arooska ayaa isaga oo dhaawac ah laguna dabiibayo isbtaalka waxaa uu warbaahinta u sheegay in ina adeerkiis uu ka mid ahaa dadka dhintay.
“Martidii Xaflada arooska way ciyaarayeen wayna dabaal dagayeen markii uu qaraxu dhacay ayuu u sheegay wakaalada Wararka ee AFP.
“Qaraxa kadib qof kasta wuxuu u ooynayay kuwii ay jeclaayeen.”
Afghaanistaan Xafladaha aroosyada waxaa inta badan lagu qabtaa hoolal waaweyn iyadoo la kala saaro ragga dumarka iyo caruurta.
Maxeey tahay falcelinta laga bixiyay?
Qoraal uu bartiisa Twitterka ku qoray , Madaxweyne Ghani ayaa waxaa ku sheegay in uu isugu yeeray laamaha amniga kulan looga arrinsanayo amniga iyo sidii looga hortagi lahaa falalka caynkaan oo kale ah.
Madaxa fulinta , Abdullah Abdullah, ayaa weerarka ku tilmaamay dambi ka dhan ah aadanaha sidoo kale danjiraha Mareykanka u fadhiya dalka Afghanistaan John Bass, waxaa ugu yeeray ficil arxan daro ah.
Afhayeen u hadlay Taalibaan waxaa uu sheegay in Ururku ay si xogan u cambaareynayaan weerarka.
” Ma jirto sabab cudur daar loogu heli karo in si ula kac ah loo beegsado caruur iyo haween ayuu ku yiri friin fariin uu warbaahinta soo mariyay ” Zabiullah Mujaheed.
Weerarkaan waxaa uu imaanayaa xili wakiilo ka socda Ururka Taalibaan iyo dowladda Mareykanka ay dalka Qadar ku leeyihiin wada hadalo ay labada dhinacba sheegeen in horumar laga gaaray.